Inotevera Apple Watch inogona kupa kutenderera dial | Ndinobva mac
Iyo inotevera Apple Watch yaigona kupa yakatenderera kumeso
Kwemwedzi yakawanda isu tanga tichitaura nezverunyerekupe rwakanangana nechizvarwa chechipiri Apple Watch, chizvarwa icho chaisambo rarama kune zvese zvakange zvichitaurwa, kutanga nechimiro cheiyo sphere iyo yaizoenda kubva pakuva yakaenzana kusvika padenderedzwa, runyerekupe urwo sekuziva kwedu tese haruna kusimbiswa. Asi zvinoita sekunge vakomana vanobva kuCupertino havana kutonga zvachose mukana wekutanga modhi iri kuuya yakafanana neMoto 360 uye Samsung Gear S3. Zvinoenderana nezvakawanda patent yakaiswa naApple, tinogona kuona kuti kambani yakumbira sei kunyoreswa kwemhando ye smartwatch nenzira yakatenderera.
Kana iwe uri vashandisi veApple Watch uye wakave nemukana wekuyedza chizvarwa chekutanga kana chechipiri Moto 360 (sezvazviri nyaya yangu) unenge waziva sei aesthetically yakatenderera skrini yakatendeseka inogona kuve yakanaka kwazvo, asi haina basa sezvo chikamu cheruzivo chisina kuratidzwa nemazvo kana chinotimanikidza kupurinda pachiratidziri kuti tizvione zvizere.
Mune iwo musoro wemvumo yawakumbira, tinogona kuverenga Chishandiso chemagetsi chine skrini ine micheto yakakombama. Zvinoenderana nezvakabatanidzwa magwaro Apple Ini ndaigona kuedza kutora mukana wepamusoro rese rekona kupa anenge asipo micheto. Hatizive kusvika padanho rekuti Apple ingangofarira kuvhura modhi nyowani, asi sechibvumiro icho chiri, hazvireve kuti inozopedzisira yaona mwenje mumusika.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Apple Watch ichiri inzvimbo yakakurumbira pamusika, kufarira muchigadzirwa ichi kwakaderera zvakanyanya mugore rapfuuraNepo kufarira kwekupfeka kubva kune vamwe vagadziri kwakawedzera zvakanyanya, kunyanya kana tichitaura nezve Samsung inopfeka, kunyanya inonakidza Gear S2 ine yakatenderera skrini ine bezel inotenderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo inotevera Apple Watch yaigona kupa yakatenderera kumeso
Fran M akadaro
Pakupedzisira! Dhizaini yeApple yakanaka kwazvo pane angangoita ese madhizaini, asi pane wachi handizive kuti vakwanisa sei kuita hutsinye hwakadai pakutengesa.
Chero ipi yepakati-renji brand ine yakanyanya kunaka dhizaini. Bvunza chero mugadziri wewachi, zvirinani kune zvewadhi dzevarume, mangani mawatch kana akaenzana emakona avanotengesa achienzaniswa newachi ine daundi yakatenderera.
Iyo wachi yenguva dzose inongotaura chete iyo nguva, iyo nhasi yatove nayo pane chero nhare, ndokuti, tinoipfeka sechishongo uye zvakafanana zvinoitika nemawatch akangwara, chero chaunoita chinoita kuti kunyange smartphone yakaipisisa ive nani, seichi sekugadzirwa zvakanyanya kukosha kupfuura tekinoroji mu wachi.
Pindura kuna Fran M
Asi kana vasingakwanise kupa stock yeWatch Series 2… .. Nei imwe wachi ???
«Chaizvoizvo haina kutevedzera zvese zvakange zvichitaurwa» ... «aesthetically, skrini yakatenderera inogona kunge yakanaka kwazvo» ...
Wakamboita kwekanguva wakaedza kufunga zvaunonyora here?
Iwo akanakisa maapplication ekugadzirisa nguva yako uye kuva anobudirira (II)
Mari isina mubereko inowanika pakutenga pawebhusaiti yeApple Huni dzakawanda!